मलाई चुनाव नलड्न कुनैपनी मुद्दाले बाध्य पारिदैन् । विकास देखेर विपक्षी आजित भएर फसायो ।
कार्तिक १२, २०७८ बलिराम यादव
गत २०७४ सालमा समपन्न निर्वाचनमा तत्कालिन संघिय समाजवादी फोरम नेपाल (हाल जसपा) मा पार्टी प्रवेश गरी पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा निर्वाचित हरिनारायण रौनियार पप्पु कन्ट्रक्सनले गरेको निर्माण कार्यको विषयलाई लिएर सांसद पदबाटै निलम्बनमा परे । हाल आउदो निर्वाचनको तयारीमा लागेका उनै नेता रौनियारसंग राजनिति र पदबाट निलम्बन लागयतको विषयमा गरिएको कुराकानी :
१) आजकाल के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म सांसद भएदेखी नै जनताको सेवामा छु, जनताको काम मै व्यस्त छु ।
२) झण्डै ५ बर्षको कार्यकाल निलम्बित मै बित्यो, अब आउने चुनावमा जनताले पुनः तपाईमाथि कसरी विश्वास गर्ने ?
संघीय सांसदमा निर्वाचित भएको एक वर्षपछि म निलम्बित भए । षडयन्त्रपूर्वक नेकपा ओली सरकारको तानाशाही र मेरो क्षेत्रको कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु मसंग पराजित भएपछि उनीहरुले अपच भएर षडयन्त्र गरे । कुनै निर्माण कार्यमा टे्क्निकल गडबडीले समस्या हुँदा मलाई फसाईयो । जुन कम्पनी मैले २०७२ सालमै छोडे, २०७४ सालमा राजनीतिमा लागेर सांसद पदमा निर्वाचित भए ।
कम्पनी त मैले २ वर्षपहिले नै छोडिसके तबपनि जबर्जस्ती फसाईयो । किनभने मैले एक वर्षमै गरेको विकास निर्माणको कार्य र जनताको दुःख सुखमा लागेको देखेर विपक्षी मसंग डरााएर म माथि विभिन्न षडयन्त्रले मुद्दा लगाएर गैर कानुनी रुपमा निलम्बन गराएको हो । गैर कानुनी रुपले निलम्बन गरिएकोले सर्वाेच्चमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । पटक पटक पेशी चढेपनि हेर्न नमिल्ने भन्दै लम्बिरहेको छ ।मुख्यतः म त सांसद नै हो । म आफ्नो क्षेत्रबाट जननिर्वाचित सांसद हु, षडयन्त्रले मलाई फसाईएको हो । संसदभित्र मात्र प्रवेशमा मलाई प्रतिबन्ध लगाईएको छ त्यसैकारण पूर्वाधारको प्रत्येक सांसदले पाउने बजेट मलाई दिन रोक्या छ । नत्र अरु राष्ट्रिय स्तरको योजना मैले थुप्रै ल्याएर काम गराएको छु ।
एकतहको राष्ट्रिय स्तरको बजेट हुन्छ, जुन मन्त्रालयबाट निकासा हुने गर्दछ । अर्काे संसदीय पूर्वाधार कोष हुन्छ, जुन प्रत्येक सांसदले आफनो क्षेत्रअधिकार भित्र रहेर आफू खुसी गर्ने पाउने अधिकार हुन्छ । बजेट त मैरै नामबाट आयो नि, मैले चलाउन नपाएर अर्काे प्रतिनीधिले चलाए । एमालेको सांसद पुष्पा ज्युले मेरै क्षेत्रमा बजेट चलाउनु भयो र म जहाँ जसरी भने त्यसरी नै बजेट राखेर विकास निर्माणको काम सम्पन्न भईरहेको छ । श्रीपुर पचगाव, देउरवानामा मेरै संसदीय कोषको रकमबाट पिच सडक बनेको छ । पोखरियामा धर्मशाला लगायत विभिन्न स–साना कामहरु भएको छ । मेरो हस्ताक्षर न मात्रै नचलेको हो । नत्र मैले भनेकै अनुसार काम भएको छ । मैले चुनावमा बाटोघाटो सडक संजाल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र रोजगार यी मुख्य एजेन्डा राखेृका थिए । यी सबै एजेन्डामा म सफल भएको छु । मेरो क्षेत्रबाट निर्वाचित कांग्रेस ्एमालेका सांसदहरुले औलामा गनेर भन्न सक्ने कुनै एउटा पनि काम गर्न सक्नु भएन् । राष्ट्रिय मार्ग वा जिल्ला मार्गसंग जोडिएको सडक निर्माण गर्न संघीय सांसदको क्षेत्रअधिकारभित्र पर्दछ ।
गाउँ, वडाको नाला, सडकको काम प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । तसर्थः मैले आफ्नो सक्रियताले संघीय सरकारको बजेटबाट विन्दवासिनीदेखी खजुरीयासम्म बाटो निर्माणको काम भईरहेको छ । कही ढलान छ, कही पिच छ । त्यसतै, बोर्डरको प्रसौनीभाठ्ठादेखी गर्दाैलसम्म र गर्दाैलदेखी रामनगरी महुवन हुँदै श्रीपुर पचगावासम्म १० किलो मिटर पिच बाटो बनिसकेको छ । बिचमा अलिकति बाँकी छ । त्यस्तै, धोरेदेखी पकहा मैनपुर, पोखरीया, निचुटा हुँदै भाठ्ठामेला जानेसम्मको बाटोको काम हुँदै छ । यस्तै विभिन्न ठाउँमा सडकको काम भएको छ । तराई समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई दिएको २५ करोड रुपैयाबाट पोखरिया नगरपालिका–१ बनकटवा, सतवरीया हुँदै पकहासम्म बाटो बनाउने काममा राखेको छु । बर्षाैदेखी अलपत्र रहेको हुलाकी सडक मेरै सक्रियतामा वीरगंजदेखी ठोरीसम्म फूरर आउने जाने बाटो भएको छ ।
महेन्द्रपथको बोर्डरमा रहेको अधुरो काम अर्थात अमरपट्टी झौवासम्म भएको काम अहिले पकहासम्म भईसकेको छ । भिस्वासम्म बनाउने प्रयासमा छौं । बिचबिचमा केही भएको पनि छ । जनता सडक, थरुवट रोड सबे ठाउँमा काम भईरेहेको छ । अन्य क्षेत्रभन्दा त पूर्वाधारको सबैभन्दा बढि काम मेरो क्षेत्रमा भएको छ नि । त्यसले गर्दा पोखरियामा बैंङ्गको विकास, बहुअर्वाभाठ्ठा चौकमा गुन्टी नभएको ठाउँमा अहिले बजार लागेर शहर बन्दै छ । बिन्दवासिनीदेखी रामनगरीसम्म फूटपातमा ८ करोडको लागतमा मैले नै नाला बनाएको छु । यी पूर्वाधारकै विकासले गर्दा अहिले क्षेत्र नं. ३ मा उद्योग, कलकरखानाको विकास भइरहेको छ । जसले गर्दा प्रतिकठ्ठा १/२ लाखको दरले बिक्रि हुने किसानको जग्गा अहिले प्रतिकठ्ठ १०÷१५ लाखको दरमा बिक्रि भइरहेको छ । पहिलो फाईदा किसानलाई भयो । तसर्थः पहिला १० कठ्ठाको १०/१५ लाख मात्रै पाउँने किसान, तर अहिले १ करोडसम्म पाईहेका छन् । अनि भएन् क्षेत्रबासीको आर्थिक समुन्नती ? अहिले हुलास उद्योग चालु भईसकेको छ ।
एउटा बियर र अकाृे जुस फ्याक्ट्री बन्दैछ । अर्काे उद्योग, कलकरखाना स्थापना भई संचालनमा आउँदा २० हजारभन्दा बढि यस क्षेत्रका युवाहरुलाई भोलिका दिनमा रोजगारी हुन्छ । राजमार्ग बनेकै कारण त किसानको जग्गाको मूल्य बढ्ेको र उद्योग कलकरखाना बनेपछि रोजगारी सृजना हुने भएको छ नि । तसर्थः ५० अर्बभन्दा बढिको लगानीको फ्याक्ट्री हाम्रो क्षेत्रमा भएको छ । त्यो लगानी अन्य क्षेत्रमा भएको छैन् । मैले उद्योगपतिलाई प्रोत्साहन गरे कि हाम्रो क्षेत्रमा बिकास गर्नुस् । यहाँ कसैको दादागिरी वा धाधली चल्दैन् । अनि यो सबै कुराको विकास भएको हो । अब मोटरसाईकल बन्ने जस्ता विभिन्न ठुल–ठुला मेगा कम्पनी प्रवेश गर्दैछ । अर्काे स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक पालिकामा अस्पताल बनाउने संघीय सरकारको बजेट आएको छ । कुनै पालिकाले टेन्डर गरिसकेको छ, त कसैले गर्दैछ ।
हाम्रो पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला मैले आफ्नो क्षेत्रमा ७ वटा हेल्थ पोस्ट ल्याएको छु । ६ वटा बनिसकेको छ, एउटा सेनबरसामा बन्दैछ । प्रदेश सरकार हाम्रो पार्टीको भएकोले पोखरिया अस्पताललाई जिल्ला हस्पिटलको रुपमा बनाए । काठमाण्डौ बाहेक पर्सा जिल्लामा शव बाहन छैन् तर मैले आफ्नो पहलले मुख्यमन्त्रीको सहयोगमा पोखरियामा शव बाहन ल्याए । प्रदेश सरकारको ५ करोडको लागतमा माथिल्लो तलाको काम हुँदै छ । कोभिड महामारीको बेला विभिन्न एक्रे मेसिन, प्लान्ट मेसिन आफ्नो व्यक्तिगत लगानी र केही उद्योगीहरुको सहयोगमा पनि सहयोग गरेको छु ।
अर्काे शिक्षाः गाउँघरका छोराछोरी भैसी, बाख्रा चराउने काम गर्थे । तर स्वच्छता अभियान, नागरिकता वितरण लगायतको विभिन्न कार्यक्रम र माध्यमबाट छोराछोरीको स्कुल भर्ना गराई पठनपाठनतर्फ आकर्षित गरायो । यसमा प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकार तिनैको भूमिका छ । प्रदेृश सरकारले ल्याएको ‘बेटी बढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियान चुनावको बेल मेरै क्षेत्रबाट मैले नै घोषणा गरेको थिए । आज प्रदेश २ मा लागु भएको छ । यो अभियानअन्तर्गत साईकल वितरणले झन छोरीहरु पठनपाठनतर्फ आकर्षित भएका छन् । दाईजो प्रथालाई उन्मूलन गर्न प्रदेश सरकारले छोरी शिक्षा बिमा लागु ग¥यो । जसपाको स्थानीय सरकार भएको पालिकामा प्रदेश सरकारको ३ लाख र स्थानीय सरकारको ३ लाख गरी ६ लाखको छोरी शिक्षा बिमा भएको छ । यसले पढाईलेखाईमा सहयोग हुदै विबाहमा समेत सहयोग हुने हुँदा छोरीहरु पनि शिक्षाबाट बञ्चित हुँदैनन् । यस्तै,मेरो क्षेत्रमा भएको ५ वटा पालिकामध्ये ३ वटामा जसपाकै सरकार रहेकोले पालिकाबाट प्रत्येक वडामा ग्यास सिलिण्डर, गर्भवती महिलालाई पोषण्युक्त खानेकुरा, बृद्धबृद्धालाई कपडा, कम्बल, किसानलाई आधुनिक कृषि प्रविधि लगायतको सामान पनि वितरण गर्न लगाएको छु । तसर्थः विकासको हरेक क्षेत्रलाई समेटेर काम गरेको छु र आफ्नो पार्टीका प्रतिनिधीहरुबाट गराएको पनि छु । जुन बोलेर होईन, जमिनमा पनि देखिरहेको छ ।
३) यसमा त अधिकांश संघीय सरकारले गरेको काम होईन र ?
अनि संघीय सरकारको प्रतिनिधी को हो त ? म नै हु नि । प्रदेश र स्थानीयले आ–आफ्नो काम गरिरहेको छ । म कहाँको को हो उसो भए ? म त संघीय सांसद हो नि । हाम्रो बिचमा नि कोही मन्त्री बनेको छ । प्रदेशको सांसद वा पालिकाको अध्यक्ष, मेयरले त संघीय सरकार बनाएको होईन नि । केन्द्र भनेको त म नै हो । केन्द्रमा बनेको बजेट त मैले राख्ने हो नि ।
४) यहाँको मुद्दा अहिले टुङ्गो लागेको छैन् ! फेरी चुनाव लड्ने यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ, मुद्दा टुङ्गो नलागि लड्न पाउँनुहुन्छ र ?
मुद्दाले चुनाव लड्न कुनै आपती गर्दैन । मुद्दा त षडयन्त्र गरेर लगाईएको हो नी । निर्वाचन नमावलीमा मुद्दा चल्दाचल्दै अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम सर्वाेच्चसम्म किनारा नलागेसम्म दोषी करार हुने छैन् । त्यसलाई रोक्न मिल्दैन् । कानुन निर्वाचन नमावलीमा यो कुरा छ । त्यसकारण मलाई चुनाव नलड्न बाध्य पारिदैन् । र मेरो मुद्दा केही समयमा खारेज भईहाल्छ । त्यसमा केही छैन्् । त्यो ओली सरकारको तानाशाह शासन व्यवस्थाको षडयन्त्र मात्रै हो । ओली सरकारमा ओलीका बिष्णु पौडेल बालुवाटारको जग्गा खायो । त्यसतै गोखुल बाँसकोटा काण्ड, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काण्ड ओली सरकारमा त काण्डैकाण्ड भयो नि । ओली सरकारले त देशै लुट्यो, खर्बाै रुपैयाँ लुट्यो । तर उसमाथि मुद्दा चलेन ।
म त एउटा मधेशीको छोरा भएकोले फुसाईयो नी । मधेशीको छोरालाई कहिले पनि पहाडी शासकहरुले अगाडी उठ्न दिन चाहदैनन् । अतः म चुनाव लड्छु, जनताले मलाई भोट दिन्छन् र म फेरी चुनाव जित्छु । किनभने विपक्षीको षडयन्त्रका बाबजुद पनि जनताको माझमा देखिने विकास निर्माणको काम गरेको छु । चुनाव लड्न कुनै कानुनी अडचनले रोक्ने छैन् ।
५) यहाँ आफ्नै व्यवसायमा रमाई राख्नु भएको थियो ? राजनीतिमा आउनु पर्ने कारण के ? यत्रो बदनामी पनि भयो !
म एउटा किसान परिवारबाट जन्मेको हो । मेरो बुवा गाउँको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । बहुदल व्यवस्थामा कांग्रेसले गरेको आन्दोलनमा युवा विधार्थी नेताको रुपमा सकृय काम गरे । ३४ बर्ष कांग्रेसमा रहेर एउटा वडा सदस्य बन्ने ईच्छा पनि राखिन् । त्यसको केही वर्षपछि आफ्नो व्यवसाय गरेर तीन वटा छोरीे र एक छोरालाई ईन्जिनियर र डाक्टर बनाउन सफल बनाए । अभिभावकत्वको दायित्व पुरा गरेपछि मैले अब के गर्ने ? सधै आफ्नै लागि गर्ने ? होईन नी ! देश, मधेश र जनताको लागि केही गरु भन्ने सोचले राजनीतिमा लागे । जबसम्म सास रहन्छ, तबसम्म मधेश र मधेशीको अधिकारको लागि लडिरहन्छु । चाहे षडयन्त्रकारीले जति षडयन्त्र किन नगरुन । रहयो कुरा बदनामीको मैले गल्ती गरे पो बदनामी हुने हो ।
६) संविधान संशोधन बिना चुनाव नै नगराउने अडानमा रहेको जसपा चुनाव पनि गरायो र संविधान संशोधन नै नगराई सरकारमा सहभागि पनि भए । चिची – पापा सबै तपाईहरुलाई नै चाहिने ?
यसको बारेमा पटक पटक राष्ट्रिय अध्यक्षजीले भन्नु भएको छ । संविधान अधुरो छ । संसारको कुनै पनि संविधान बन्छ भने, एकैपटकमा पूर्णता पाउँदैन् । त्यसैले संविधानमा धेरै कुरा राख्नुपर्ने थियो । केही पाईयो, केही बाँकी छ । सबैभन्दा ठुलो के हो भने जनतालाई संघियता पाईयो । त्यसपछिको कुरा यथावत छ । त्यसलाई साक्षी राखेर संविधान स्वीकार गरेर चुनावमा गएका हौं र भोली पनि जान्छौ । यो कुरा बिस्तारै संसदबाट पास गराउँदै संघीयता स्थापित गराउँदै छौं । भविष्यमा पूर्ण अधिकारसहितको संघीयता स्थापित गराउँछौं भन्ने हाम्रो विश्वास हो । भारतको एक अर्ब ३४ करोडको ठुलो जनसंख्याको संविधान पनि आजसम्म समय समय अनुसार परिवर्तन हँुदैछ । संविधान त परिवर्तनशिल हो नि । आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भईरहन्छ । तर हामीले पाएको केही उपलब्धी त संरक्षण गर्नु पर्छ नि ।
७) यसरी मधेशका जनतालाई भ्रममा राखेर आउँदो निर्वाचनमा मधेशको जनताको मन जित्न सक्नु हुन्छ तपाईहरु ?
जसपाले गरेको मधेश आन्दोलनकै देन हो कि आज देशमा संघीयता र गाउँगाउँमा सिंहदरबार आएको छ । सदियोदेखी खसबाहुनहरु एकै ठाउँमा बसेर शासन गर्थे त्यो अहिले बाँडफाँड गरेर सात ठाउँमा पु¥याईयो । आजको दिनमा प्रत्येक प्रदेशमा २० अर्बभन्दा बढि बजेट आइरहेको छ । प्रत्येक पालिकामा २० देखी ४० करोडसम्मको बजेट आईरहेको छ । यो त सब संघीयताको देन न हो, जुन संघीयता मधेश आन्दोलनबाट आएको हो । नत्र भने अहिले गाविसहरु ५÷१० लाख बजेटमै सिमित हुन्थे । अहिले गाउँगाउँ टोलटोलमा नाला, ढलान सडक बनिरहेको छ, त्यो के हो ? संघीयताकै उपलब्धी हो । गाउँगाउँमा समुदायिक विद्यालय, हस्पिटल बनिरहेको छ, त्यो सबै संघीयताले ल्याएको हो र म फेरी दोहोर्याए कि मधेश आन्दोलनले नै देशमा संघीयता आएको हो ।
८) संघियता अरुदलहरुको पनी देन हो खैर, जसपा त यादवहरुकै समूह रहेछ भन्ने अवाजहरु वाहिर आउदैछ, जनताले मधेशको अधिकार जसपा भनेर विश्वास गर्न सक्ला र ?
हिजो पनि गरेका छन्, आज पनि गर्छन् र भोली पनि गर्नेछन् । यो त देशको बिचौलिया, कांग्रेस र एमालेले भ्रम छर्ने भ्रम न काम गरेको हो । किनभने देशमा ६० वर्षसम्म शासन गरेछन् । ३० वर्षको पञ्चायतकालमा यिनीहरुकै अनुहार थियो र ३० वर्षको प्रजान्तत्रमा यिनीहरु नै शासक थिए । अब कति नाटकमा फसाउँछन् मधेशीहरुलाई ? न मधेशमा बाटोघाटो दिए, न स्वास्थ्य, शिक्षा दिए । अहिले गाउँ गाउँमा हेर्नुस् न, ५० वर्षमा नभएको काम ४÷५ वर्षभित्रमा भएको छ । पार्टी चाहे जुनसुकै होस् । सिस्टम त हामीले गर्दा आएको हो नि । कुन पार्टीमा यादवको संख्या छैन ! जहाँ बहुसंख्यक हुन्छ त्यसको संख्या हुन्छ नै । के कांग्रेस, एमाले, माओवादी र लोसपामा यादवहरु छैनन् र ?
यादवको पार्टी भनेर मधेशमा दुस्प्रचार गर्ने काम मात्रै भएको हो । मधेशको जनसंख्या ५१ प्रतिशत छ तर अझैसम्म कोही मधेशी प्रधानमन्त्री भएको छैन् । के मधेशमा विद्वानहरु छैनन् र ? सवाल यो पनी हो ।
#हरिनारायण रौनियार #जसपा, पर्सा
शुक्रवार, कार्तिक १२, २०७८, ०८:१०:००